राति सुत्नुअघि ग्रीन टी पिउँदा के हुन्छ ? | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home गृहपृष्ठ राति सुत्नुअघि ग्रीन टी पिउँदा के हुन्छ ?
ग्रीन टी स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा पाइने पौष्टिक तŒवले तपाईंलाई धेरै किसिमले फाइदा पु¥याउँछ तर यसको मात्रालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । केही मानिस दिनभरि धेरै कप ग्रीन टी पिउने गर्छन् । यसले तपाईंलाई फाइदा गर्दैन । त्यसैगरी, धेरै मानिस राति सुत्नुअघि ग्रीन टी पिउने गर्छन् । यसले फाइदा पु¥याउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ तर विज्ञहरूका अनुसार ग्रीन टीले तपाईंको निद्रामा असर गर्छ ।
ग्रीन टी पिउने सही समय के हो भन्नेबारेमा धेरै अनुसन्धान भएको छैन । तर हरियो चियामा पाइने क्याफिनको थोरै मात्राले निद्रामा असर पार्न सक्छ र मस्तिष्कको सतर्कता बढाएर निद्रामा गडबडी गराउन सक्छ । रातिमा हरियो चिया पिउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
सुत्नुअघि धेरै तरल पदार्थ पिउँदा बारम्बार पिसाब लाग्न सक्छ, जसले निद्रामा बाधा पु¥याउँछ । यस्तो अवस्थामा राति थोरै मात्रामा र सुत्दा कम मात्रामा ग्रीन टी पिउन सकिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार दिनमा दुई/तीन कपभन्दा बढी ग्रीन टी पिउनुहुँदैन । तपाईं दिन र साँझमा हरियो चिया पिउन सक्नुहुन्छ ।
बढी मात्रामा ग्रीन टी पिउनाले वाकवाकी लाग्ने, अनिद्रा हुने र एनिमिया हुन सक्छ । सबैभन्दा पहिले ग्रीन टी किन पिउने जान्न जरुरी छ । हरियो चिया क्यामेलिया सिनेन्सिस प्लान्टको पातबाट निकालिन्छ, जुन एन्टिअक्सिडेन्ट र पोषक तŒवले भरपूर हुन्छ । हरियो चियाले स्नायुलाई आराम दिन्छ, मस्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउँछ र शरीरमा फ्रि रेडिकलका कारण हुने कोषिकाको क्षतिलाई कम गर्छ ।
हरियो चियामा क्याटेचिन नामक यौगिक पाइन्छ, साथै एपिगालोकाटेचिन ग्यालेट (भ्न्ऋन्ऋ) र भ्उष्नबिियअबतभअजष्ल (भ्न्ऋ) नामक एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । यसका अलावा यसमा थेनाइन एमिनो एसिड पनि हुन्छ, जसले स्नायुलाई मदत गर्छ । यसले मस्तिष्कलाई आराम दिने, मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, स्मरणशक्ति बढाउने, तनाव कम गर्ने र राम्रो निद्रा ल्याउने काम गर्छ ।
Previous articleयस्ता महिलाप्रति पुरुष आकर्षित हुन्छन्
Next articleतालिबानीहरूसँग भेटवार्ता लाभदायक –चिनियाँ विदेशमन्त्री